ညက ကြည့်လိုက်ရတဲ့ လိုက်ဖ်ရှိုး :P | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Critic » ညက ကြည့်လိုက်ရတဲ့ လိုက်ဖ်ရှိုး :P	43
Posted byetone on Jul 2, 2012 in Critic, My Dear Diary | 43 comments
ငှက်တွေလွှတ်တာ အဒူတဲ့ယဲ :P
မနေ့ညက ဆယ်နာရီ ဆယ်မိနစ်အချိန်ကနေစပြီး MRTV4ရဲ့ လိုက်ဗ်ထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့ အစီစဉ်တစ်ခုကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်မိခဲ့ပါတယ် ။ နာမည်ကြီး ဓါတ်ပုံစတူဒီယိုတစ်ခုကနေ လုပ်တဲ့ ပွဲဖြစ်ပြီး ၊ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးတွေ နဲ့ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို ခင်းကျင်းပြသတဲ့ ခမ်းနားတဲ့ ပွဲတစ်ခုပါပဲ ။ စတိတ်စင် အပြင် ဆင်ကစလို့ ၊ ပါဝင်ကိုယ်ဟန်ပြသူလေးတွေကလည်း နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေကနေအစ ၊ တက်သစ်စမော်ဒယ်လ်လေးတွေ အဆုံး ၊ အများကြီးပါဝင်ပြီး အတော်လေး ခမ်းနားအောင် တင်ဆက်ပြသပေးထားတာပါ ။ မြန်မာ့မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ ခြုံပ၀ါအရှည်ကြီးတွေနဲ့ မော်ဒယ်၊သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း … အလှချင်းပြိုင်လို့ပေါ့ ။ မြင်ရတာ အရမ်းကို ကျက်သရေရှိပြီး ချက်ချင်းမင်္ဂလာဆောင် လုပ်ချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ် … တကယ် .. တကယ် .. အဟိ :P ပုဝါကြီး တစ်စ တစ်စက … ၁၈တောင်ရှည်သတဲ့လေ … ။ မြန်မာ့ရိုးရာ ဘိတ်သိတ်နဲ့ ရေစင်သွန်းပြီး စုလျားရစ်ပတ်တဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကိုလည်း သရုပ်ဆောင် ထက်ထက်မိုးဦးနဲ့ သူ့အမျိုးသားတို့က သရုပ်ဆောင်များ ၊ မော်ဒယ်လ်များခြံရံပြီး သရုပ်ပြသွားတာ တကယ်ကြည့်ကောင်းခဲ့ပါတယ် ။ အခါတော်ပေးကို … နာမည်ကြီး အငြိမ့်ဆရာမကြီး ဒေါ်အေးအေးမြင့်က သီဆိုတာလည်း အလွန်လိုက်ဖက်လွန်းလှပါတယ် … ။ အဲ့ဒီအစီစဉ်ပြီးတော့ … မြန်မာမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနဲ့ တတွဲခြင်း တတွဲခြင်း လက်ချင်းချိတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ မင်္ဂလာမောင်နှံအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဒီပွဲကို ပိုမိုစည်ကား စေပါတယ် ။ အဲ့ဒီနောက်မှာ တယောက်ချင်းစီ မြန်မာထိုင်မသိမ်း ဒီဇိုင်းစုံအရောင်စုံကိုဝတ်ပြီး သရုပ်ပြကြတာလည်း ဒီပွဲရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပါပဲ ။
အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကို အစဆုံး စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေခဲ့တဲ့ ကျွန်မကပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မှင်သက်မိနေတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်ရယ်ချင်မိပြီး … ၀ါးလုံးကွဲ အော်ရယ်မိလိုက်ပါတယ် ။ ညသန်းခေါင်နီးပါး တအိမ်လုံးအိပ်နေချိန်အော်ရယ်မိတာကြောင့် အိပ်ယာထဲကနေ လူကြီးတွေဆူသံလေး သဲ့သဲ့ကြားရတော့ …. အဆဲခံထိမှာ စိုးတာကြောင့် တီဗွီအသာပိတ်ပြီး အိပ်ယာထဲ ဒိုင်ပင်ပစ်ဝင် အိပ်လိုက်ရပါတော့တယ် ။ သြော် … လိုက်ဖ်ရှိုးကြည့်ရတာ အရသာက ဂလိုကိုးလို့ .. အိပ်မက်ထဲထိတောင် စွဲသွားခဲ့တယ် … :P
e tone has written 832 post in this blog.
ဆန်ကုန် ... မြေလေး ... အဲဗားစိတ်တို .... တဇွတ်ထိုး .. တဇောက်ကန်း ... အသုံးမကျ ... ဘုဂလန့်
mamanoyar says: အင်းးးးးးးးးးးးမမe tone ရေးတာက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1765
surmi says: ပြောလိုက် အဲဒီမင်းသမီးကို ဥစ္စာစောင့် ကားရိုက်မလားလို့ 
etone says: မမနိုရာရဲ့ . … ကြည့်ရလျှင် အဲ့ဒီထက်ပိုပြီး … ဟိဟိ :P ကိုဆာမိပြောမှပဲ ဥစ္စာစောင့်နဲ့ ပိုတူသလို ခံစားရတယ် အဟိ … ။
မနေ့က တီဗွီနားကို ကင်မရာနဲ့ ကပ်သွားပါတယ် …. အလင်းတွေများပြီး မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် … ။ နောက်ပိုင်းတွေပြန်လွှင့်လျှင် အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခန်းတွေ မပါလောက်တော့ဘူးထင်ပါရဲ့ … :P
mamanoyar says: မမetoneနော် သူများကို လာပြီးပြောနဲ့
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says: ပိုက်ချံများ ချိလို့ကတော့ …
Khaing Khaing says: အော် နံမည်ပြောင်းထားတာဘီလူးလဲမှတ်တယ် လတ်စသတ်တော့ ကိုဂီဖြစ်နေတာကို ………
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says: လက်မတို့ပါနဲ့ ကွယ်. .. ငိုချင်နေပါတယ်ဆိုမှ…
Shwe Tike Soe says: ကျွန်တော်လဲ ကြည့်လိုက်ရတယ်….
ပီးတော့ ထိုင်မသိမ်းကြီးတွေ အရှည်ကြီးတွေနဲ. လမ်းလျှောက်ရတာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မော်ဒယ်မင်းသမီးတွေ လဲ ရှိသေးတယ်နော်…… မပြောချင်ပါဘူးအေ..သများအကြောင်း :P
Rose Minn says: ခေတ်ကာလ ရွေ့လျားလာတာလား။ ဘာလားတော့မသိပေမယ့်။ မင်္ဂလာဆောင်ကို အနက်ရောင် ၀တ်တာ မကြိုက်ရေးချ မကြိုက်ပါ။ အနက်ရောင်ကုပ် ဆိုတာ အင်တာနေရှင်နယ် စတိုင်တွေဖြစ်ပေမယ့်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မင်္ဂလာဆောင် အကျီင်္ အနက်ရောင်ဝတ်တာ မကြိုက်ဘူး။ သူ့ဘာသာခေတ်မှီတဲ့ အီမိုဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ မင်္ဂလာယူရမယ့်နေရာမှာ ဗမာအမြင်နဲ့ ကြည့်ရင်တော့မတင့်တယ်ဘူးပေါ့လေ။ မင်္ဂဆောင် မှာ အသုဘ နဲ့ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ နောက်က လိုက်နဲ့ နှစ်ယောက်ရုပ်ကလည်း စုန်းလိုလို ကဝေလိုလိုနဲ့ ကြောက်ချာကြီး။ … :P
etone says: အောင်မလေး ကိုဂီ နာမည်ပြော်းထားပြန်ပါပကောလား … မျက်စိများတောင် လည်တယ် … အဲ့ဒီ အဗာတာ ပုံကိုကြည့်ရင်း … ညက မျက်နှာတွေကို ပြန်သတိရမိတယ် .. ဗြဲ ဟဲဟဲ :P
အိပ်ယာထဲ ဒိုင်ပင်ပစ်ဝင်တဲ့ အကြောင်းက မီးမပိတ်လို့ အိပ်ယာနိုးတော့ အဆဲခံရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းနဲ့ ဆုံး သွားတယ် ရွှေတိုက် …. ကျန်တာကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဆက်စပ်ပုံဖော်ပလိုက် … ဟိဟိ :D ထိုင်မသိမ်းတွေနဲ့ … ကြမ်းပြင်က ချောချော ဒေါက်က ချွန်ချွန်တွေနဲ့ .. ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပါပဲ … သူတို့အစား … အသည်းယားထှာအေ .. မရို့စ်ရော .. ညက ကြည့်လိုက်ရသေးတယ် ထင်တယ် ..အ ဟီး … ။ :P ပုဝါလေး တစ်စကို တယောက်တဖက်စီ လက်တဖက်တည်းနဲ့ မတာလည်း စတိုင်ပဲ ထင်ပါရဲ့ :D
ပစ်စလက်ခတ် မျက်ရည် says: မျက်လုံးထောင့်စွန်းကို တစ်ရှူးနဲ့ တို့ရင်း ပြောလိုက်ပါဦးမယ်လေ ..ဟင့် …
etone says: ရူးးးးးးးးးးးးးး တိုးးးးးးးးးးးးးး တိုးးးးးးးးးးးးး အားလူးကြော် .. အဲ မွှားလို့ ..
ကိုဂီ .. နိုင်ငံရေးတွေ မပြောရဘူး …. ဂနဲ့ နွယ်လာရိုက်လိမ့်မယ် … သူတို့သားလေး တောက်စ်ခေါက်ပြီး ရှေ့ကကျနေတဲ့ဆံပင်လာဆွဲနေဦးမယ် တိုးတိုးပြော … :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1199
amatmin says: မကြည့်လိုက်ရပါဘူး..အခုမအိတုန်ရေးပြတာ.ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပါပဲ..
အရှက်ကွဲပေမဲ့ လူသူမသိပါဘူးဆိုတာလေး. :P :P
Khaing Khaing says: မမတုံ ညဘက်ပြတာတွေကို မကြည့်ဖြစ်ဘူး အိပ်ရေးပျက်လို့ …… မမတုံရေးပြမှ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကြီးကို မြင်ယောင်မိပီး အူတက်အောင်ရယ်လိုက်ရပါတယ် …….. ညဘက်မအိပ် မနက်ကြရင် ဖုန်းခေါ်တာတောင် ကိုကိုဖုန်းခေါ်နေတယ် ကိုကိုဖုန်းခေါ်နေတယ် ကိုကိုခေါ်မကြား အော်မကြား ဘာချင်း-ဆိုလားပဲ ……. မမတုံလည်း ညဘက်မအိပ်တော့ မနက်ဆို ဖုန်းခေါ် ရင်တောင် မကိုင်နိုင်ဘူးနော် ……..
etone says: ကိုမတ်ရေ … ကျွန်မမကြည့်တဲ့ အချိန် Live show လာလျှင် ဒီထက်ပိုလူသိလိမ့်မယ် .. အဟိ ..
ကျွန်မက ပြောင်းပြန်လေ … သူများ အိပ်ချိန်ကျမှ အိမ်ရောက်ပြီး တီဗွီကြည့်ချိန်က သူများတွေကြည့်တာ နည်းသွားတဲ့ အချိန်မို့ပါ … ။ လိုက်ဖ်ရှိုးတွေကလေ .. စတော့သာ ဘယ်နှစ်နာရီကြော်ငြာထားပေမယ့် .. တကယ်တမ်း … လူတွေဝတ်စားပြီး သွားထိုင်နေတာပဲ ရှိတယ် အစီစဉ်စတာ ညဦးပိုင်းရော်ကမှ စတာများတယ် …. ။ စတိတ်ရျှိုးတွေ ၊ လိုက်ဖ်ရှိုးတွေ ၊ ဖရီးရှိုးတွေ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ လက်မှတ်ဝယ်ရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အလကား ရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားကို မကြည့်ဘူး …. စိတ်တွေအိုက်လွန်းလို့ ……… အခုလိုပဲ တီဗွီက ထိုင်ကြည့်တယ် ။ ရှေ့ဆုံးတန်းက ကြည့်ရသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်ရတယ် .. အဟိ :P မမခိုင်နော် … တူညားက အလုပ်လုပ်ရင်း ကြည့်တာပါနော် … ညဘက်မအိပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး အိပ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အိပ်ချိန်ကို လျော့ထားတာပါ … ဟိုတခါ မမခိုင်ဖုန်းဆက်တုန်းက တခါလေးပဲ အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်မိတာ တနင်္ဂနွေနေ့မို့ပါ .. တနင်္ဂနွေဆို … အနည်းဆုံး ဆယ့်တစ်လောက်ထိ အိပ်တယ် .. ကျန်တဲ့ ရက်တွေမှာ တနေ့ အိပ်ချိန်6နာရီဆိုတာ အများဆုံး မို့လို့လေ … အဟီး :D
myanmarcitizen says: ညက ကျွန်တော်လဲ ငန်းလိုက်သေး အဲ့ ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ငန်းနေရင်း နဲ့ မီးပြတ်လို့ အိပ်လိုက်ရော။ အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟလား … တော်တော်ကို ရီရမှာပဲ … မှတ်အုန်း သူများထက် ဆန်းချင်အုန်း။
etone says: ကျွန်မလည်း ကြည့်နေတုန်း မီးပျက်တော့ အိပ်မလို့ လုပ်နေရာက မီးက ခဏလေးနဲ့ ပြန်လာလို့ .. ပြန်ကြည့်ဖြစ်တာမှာ ခဏကြာတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကို တွေ့တာပါပဲ … ။ အော .. ယောကျာ်းလေးမှန်း သိပါပြီ .. ဟီး ။ :D
မောင်လေပေါ says: ဦးနှောက်မှ ကောင်းရဲ့လားမသိဘူး..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 859
Novy says: မကြည့်လိုက်ရတာ နာတာပဲ
မောင်ပေ says: အိတုန်ရဲ့သရုပ်ဖော် ရီးရဲလစ်ဇင် ရေးချက် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ
awra-cho says: လိုက်ဖ် ရှိုးကို အဲတာမျိူးကြောင့် ကြည့်ချင်တာပေါ့၊ အဆိုတော်တွေ သီချင်းဆိုတာ တိုတိတိုနံ့ ဆိုတော့ မလုံမလဲ တွေ၊ ပျက်လုံးတွေ ဆင်ဆာ မဖြတ်တာ တွေ က နင့်မို့ဆို သွားကြည့်တဲ့သူ ပဲမြင် ရမှာပေါ့ အခုတော့ တန်းတုဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါတောင် နှင်းဆီ အငြိမ့် ကို အသံပိတ်ထား တာ၊ လွှင့်ပြီးသားပြန်လွှင့်တာ တွေ လုပ်သေးဗျ။
etone says: ဗိုက်ဗိုက်ရယ် …
ဖြူဖြူကိုပြော .. အဲ .. ဟိုအဆိုတော်လေးကိုပြောတာလား .. နာ့ကိုပြောတာလားဟယ် … တစ်လုံးထဲနဲ့ နှစ်ကောင်ထိတယ် .. (ဂဲတလုံးနော် အဟိ) :D မနိုက … မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံတွေပြတဲ့ ပွဲဆိုတော့ ဘယ်စိတ်ဝင်စားတော့မလဲ .. အဟဲ .. လိုမှ မလိုတာနော် .. ဟိဟိ (နောက်တာပါ ) …. မနိုရေ ညီမလည်းစောင့်နေတာက ကိုရီးယားကားပါ .. လာမလားလို့ စောင့်နေတာ … အင်တာဗျူးဝင်လို့ ခဏကြည့်ပြီး … နောက်က လိုက်ဖ်ရှိုး တဆက်တည်း လာတော့ မထူးပါဘူးဆိုပြီး မီးပူတိုက်ရင်း တီဗွီငေးဖြစ်သွားတာ … :P ကိုပေရေ …. ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ ထိုင်ရတဲ့ လူတွေဆို .. အခုလို ငှက်လွှတ်တဲ့ အဖြစ်ပျက်တင်မဟုတ်ဘူး … မင်းသမီးတွေ ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်တိုင်းထမိန်က ဘယ်ဖုံးများလို့ ရယ်၊ စတိတ်ကို တပတ်ပတ်တဲ့အခါ လက်ယာရစ်ပတ်ရတာကြောင့်ရယ် …… ခြေလှမ်းတိုင်း ၊လွတ်ပြီး ပေါင်တွေအထိ ပေါ်နေတာတွေပါ မြင်ရမှာ …ဟိဟိ … ။ awra-choရေ .. ပျောက်နေတာကြာပြီနော် … ။
manawphyulay says: စတိုင်ရှိမှ စတားဖြစ်မှာလေ… သူက သူများနဲ့မတူတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကို ရရှိထားသူလေးဆိုတော့လည်း ခု ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားနေကြတာပေါ့။ ညီမလေး ပြောပုံက ကြည့်စရာမလိုအောင်ကို ထောင့်စေ့ပြီး ပြည့်စုံတဲ့အပြင် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို မြင်ယောင်နေမိတယ်။ အမလည်း ဖတ်ပြီး ရယ်လိုက်တာ အင်တာနက်ဆိုင်က လူတွေ အမကို ၀ိုင်းကြည့်နေလို့ မနည်း မျက်နှာပိုးသတ်ပြီး ကော့မန့်ရေးလိုက်ရပါတော့တယ်… :O :D
etone says: အစ်မမနောရေ … ထောက်ပြတာ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်နော် …
ကျွန်မရဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှတ်နိုင်စွမ်းက .. မူလတန်းကလေးထက်တောင် နိမ့်ကျနေတာ ရှက်မိပါတယ် … အမှားကို အမှန်ပြင်ပေးလို့ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ် အစ်မရေ နောက်ဆို ပရိတ်သတ်လို့ မပေါင်း တော့ဘူးနော် ……. ပရိသတ်လို့ပဲ ပေါင်းတော့မယ် ……. ကျေးဇူး x မီလီယံ … ခွိခွိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 476
AKKO says: ဒါဆို ငါးတန်ပြန်ဆင်းရမယ့်အထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းပါမယ် ထင်ပါ့ ။
ပရိသတ်ဆိုတာ အခုမှ သိတော့တယ် ။ မူလတန်းကို ပြန်ဒိုးတာပေါ ဟဲဟဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1583
Moe Z says: နေဦး အရင်ရယ်လိုက်ဦးမယ်
မမအိတုံရဲ့ ထပ်ဆင့်လိုက်ဖ်ရှိူးကို အားပေးသွားပါတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 500
ahnyartamar says: မကြည့်လိုက်ရဘူးကွာ။ ဘောလုံးပွဲမဲနေလို့။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1196
Shwe Ei says: အိမ်မှာ တီဗွီ Antenna မတပ်ဘဲနေမိတာ ဒီတခါမှ နောင်တရတော့မလိုဖြစ်နေဘီ။ အဲလို ကဂျိုးကဂျောင် တွေမြင်ရမှာစိုးတာလဲပါတာပေါ့လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 800
ရဲစည် says: ဟာ ဒါမှန်းသိရင် စလောင်းပြန်ဆင်ထားပါတယ်ကွာ
မွန်မွန် says: အဟီး…အစ်မရယ်..မွန်မွန့်မျက်လုံးထဲမှာတော့လေ သူက မထိမထိပြုံးနေတယ်လို့ကို မထင်ဘူး…သူ့ပ၀ါကြီးနဲ့ လုံချည်ကြီးနဲ့ကြားမှာ ကိုးလို့ကန့်လန့်နဲ့ ထိန်းလျှောက်နေရလို့ စိတ်ဖိစီးနေတယ်လို့ပဲ မြင်မိတယ်…
ပြီးတော့လည်း အစ်မလိုပဲ ထင်လိုက်သေးတာ…ခိုဖြူကိုများ လွှတ်မှာလားလို့… ဘယ်ဟုတ်မလဲ..သူက ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး ပို့စ်ပေးတာပဲ…မွန်မွန်လည်း ကြည့်နေရင်းနဲ့ မောနေတာ…ပါးပဲ ဆိတ်လိုက်မလား…အတောင်ဖြန့်ပြီး ပြန်လိုက်လို့ ခေါင်းပဲ ထိသွားမလားဆိုပြီး… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4992
၀မ်းတွင်းရူး says: မမအိတုံအကြံပြုချက်“နေရာတိုင်းမှာ creative လုပ်တာ ကောင်းပါတယ် …
တွေးပြီးမှ creative လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ ထင်မြင်မိရင်း ….”"
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2004
TNA says: ကြည့်ရင်တောင်ရေးတာလောက်စုံအောင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အခုဟာက အားလုံးကို slow motion နဲ့ ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်တာ။ အိပ်ရေးမပျက်ပဲ စုံအောင်ကြည့်သွားရလို့ကျေးဇူးပါတုန် တုန်ရေ။ ဒီလိုအကျိုးဆောင်ရသောကြောင့် တုန်တုန်လဲမြန်မကြာ ထိုဝတ်စုံကိုဝတ်ရပါစေလို့ ။
ကြောင်ဝတုတ် says: မကြည့်လိုက်ရပေမယ့် ပြောတဲ့ပုံစံကိုမှန်းရရင်
ရွာစားကျော် says: ဒေါ်အိတုံ စာနဲ့ရေးပြောတဲ့ ရီပလေးကို ကြည့်ပြီး နားကပ်လေးတောင် စကရင်ထဲက ထွက်ကျလာတော့မလိုဘဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကို အဖြစ်အပျက်ကို မျက်လုံးထဲ မြင်ယောင်တယ်.. ဟီး ဟီး
tharli kar says: ဒေါ်အိတုံခင်ဗျား….
Crystalline says: ဒီဇိုင်နာတွေကလည်း ဖက်ရှင်တီဗွီက ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ဒီဇိုင်းကို ပုံတူကူး ဖြတ်ညပ်တာကပ်ကူးတာလွန်သွားတော့ မော်ဒယ်ဒုတ်ခရောက်ပြီးပေါ့.. ခင်ဘုဏ်းတို့မင်္ဂလာဆောင်မှာလည်း အနက်တွေဝတ်တာတွေ့လိုက်တယ်..
ဟိန်း ၀င်း (ထားဝယ်သား) says: နောက်ဆို ဒီထက်ဆိုးတာတွေ လာအုံးမယ် …
kyeemite says: ကျုပ်တော့အဲလောက်ညနက်သန်းကောင်
etone says: အင်းပေါ့ … ဦးမိုက်ကြီးက ကျန်းမာရေး အရေးထားတယ် … အိပ်ရေးပျက်ခံလို့ မရဘူး .. ဟီးဟီး :D
ငါးတန်းတော့ ပြန်မဆင်းတော့ပါဘူး ဦးမိုက်ရယ် …. ပုစွန်တန်းဆို နည်းနည်းတော်သေးတယ် … ပုစွန်ထုတ်ဈေးကောင်းတယ် .. ဟိဟိ …. ။ တူနှစ်ကိုယ်တဲအိုပျက်မှာ ပုစွန်ထုတ်ပဲ ဖုတ်စားရ စားရ … ဟိဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 286
Phaung Phaung says: etone ရေးပြမှပဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမျက်စိထဲမြင်သွားတော့တယ်… ညကမကြည့်လိုက်ရပေမယ့် … etone ရေးတာဖတ်ရတာပိုတန်သွားတယ်….ရီလိုက်ရတာ… မျက်စိထဲပြန်ပြန်မြင်နေလို့ ပြုံးစိစိဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1329
Ma Ei says: အိတုန်လေး အပြောနဲ့တင်
etone says: အစ်မဖောင်းဖောင်းရေ .. သူများကို ရေးဖို့ဆို မျက်လုံးကြီးပြူ့းပြီး ကြည့်ထားတာ .. အဟိ… ။ သူ့အကြောင်းရေးမှန်းသာ သိလျှင် ကြိမ်ဆဲနေလောက်ပြီ ဟိဟိ … :P
snow white says: မမအိ ညီမလေးလည်း ကြည့်လိုက်ရတယ် အဲ့ လိုက်ဖ်ရှိုး ညီမတို့သားမိ နှစ်ယောက်ကြည့်မိတယ် ညီလေးတို့သားမိနှစ်ယောက်ရယ်တာကို အိမ်ကအဖေကဘာဖြစ်တာလည်းလို့မေးတော့ အဲ့ ဒါသရုပ်ဆောင်တဲ့ နာမည်ကိုအမေကပြောလိုက်တယ် သူကလုပ်လိုက်ရင် တကယ့်ရယ်စရာတွေဘဲတင်ပြတော့တာဘဲတဲ့လေ စနိုးတို့လည်းအဲ့နေကရယ်ရတယ်မမအိရယ်…